Zvakanaka Nesungano Itsva, iyo yedu rwezuva hurukuro pamusoro manheru, ndizvo anenge akafanana Remix. Ndinoti kuti nokuti Mwari anovimbisa kuti sungano itsva nevanhu vake, asi zvose nezvazvo hakusi chitsva. hunhu hwake haana kushanduka, Zvipikirwa zvake haana kuchinja, Chinangwa chake chikuru haina kuchinja. Asi pane zvimwe zvinhu pamusoro sungano iyi vari yakatosiyana. Uye nekuda kwechivi chedu, sungano yekare haana kushanda. saka, Mwari nani pamusoro payo itsva. Yakanga isiri zano rake B, asi iye aronga zvose pamwe kuti sungano itsva kuti Mwanakomana wake auye pamusoro. Uye tinoverenga nezveizvi Wesungano Itsva muna Jeremiah 31.
Regai ndikuudzei makuriro andakaita tisati kuverenga chinyorwa.
In Exodus, pashure vanhu vaMwari vave vakadzvinyirirwa uye varanda nevaIjipiti, vanodanidzira kwaari kununurwa. Uye anovanunura vari kunoshamisa mufashoni nematambudziko gumi uye vanoshandura mwoyo waFarao, uye anotsemura Gungwa Dzvuku. Pashure pokunge Mwari akanunura vanhu veIsraeri, Iye anoita sungano navo. Anoti, "Naizvozvo zvino, kana mukaisa kuteerera inzwi rangu uye mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu nhaka pakati pendudzi dzose…" (Exodus 19:5). Iye anovayeuchidza chii zvaAkaita kwavo nokuda. Anovapa 10 mirayiro kuti vari kutevedzera. Mwari anovimbisa kuti kuvakomborera kana ivo vanomuteerera, uye kutuka kana vakasateerera kwaAri. Zvino vanhu kubvumirana sungano iyi uye kuita mhiko kuteerera Mwari.
Sounds kodzero huru? Ita anoti uye zvose zvichanaka. Vachada raMwari kukosha nhaka, Achazviita kuvakomborera, uye vachada vachigara vachifara nokusingaperi. Dambudziko iri havana kumuteerera. Havana kufambirana divi ravo pamusoro ngaakuitirei. Uye saka isu tichimanikidzwa munguva Jeremiah.
Bhuku raJeremiya kuchikonzerwa bhuku pamusoro mutongo. Vazhinji bhuku ndiMwari Anotuka vanhu kuburikidza nomuprofita wake Jeremiya nokuda kwokusateerera kwavo, uye kuprofita pamusoro kuparadzwa kwavo. Asi pane diki chikamu (30-33), apo rugwaro rwedu unowanikwa nhasi, umo Mwari anzwe kuzvipira kwake kwavari, pasinei nokupanduka kwavo, uye anoprofita makomborero iye achadurura pavari. Rimwe zuva pashure zvose kuparadzwa uku, Ari kuenda ndikavadzosera. Anovaudza izvi Wesungano Itsva Achazova navo. Uye ndizvo zvatiri kuenda kufunga nhasi. Kune vazhinji, zvinhu zvakawanda kuti tinogona kutaura pamusoro Wesungano Itsva, asi tava kuisa ichi mangwanani ndima imwe.
Ndichava Mwari wavo,uye ivo vachava vanhu vangu. " (Jeremiah 31:33)
Ndinoda kunongedzera zvinhu zvina tinofanira kuonga uye nokurumbidza Mwari nokuda patinofungisisa chinyorwa ichi.
Rugwaro rwacho runoti, "Iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri…" Ruzha rwakaita National chinhu chakanaka? Saka sei kuti Nesungano Itsva ari Mwari achishanda pose?
Zvakanaka Exodus Mwari akaita sungano nevanhu vake vaIsraeri. Uye Munguva bhuku raJeremiya, Sungano itsva iyi riri kuitwa nevaIsraeri. Kune vamwe kujekesa pachena kuti Mwari akaronga kuita basa kunze vaIsraeri, asi panguva Mwari ari kuita vimbiso zvakananga rudzi rwaIsraeri pamusoro rokudzorera pavo.
Zvino Jesu anouya Pasi, Ake kukoshesa yakajeka vaJudha. In Matthew 15:24, Jesu anoti, "Ini kutumwa makwai akarasika eimba yaIsraeri." Asi chokwadi vaIsraeri vanomuramba uye pakazopera Evhangeri yaMateu, zano rake hwakajeka. Anoti 'kuita vadzidzi,"Kwete chete vaIsraeri, asi marudzi ose.
Uye tinoona kuti zvakadaro zvakajeka muna Mabasa vose Testamende Itsva, kuti basa raMwari rokuponesa vatadzi kwaita kuwedzerwa. Iye kunyange anotuma sezvisingaiti Apostle, Paul, kuti zvakananga kuvaHedheni. Ake kukoshesa hachisisiri pamusoro National vanhu, asi munyika vanhu.
Uye tinofanira kurumbidza Mwari nokuda ichi! Hapana anofanira vaponeswe uye vachadzorerwa Mwari, saka Akanga nyasha kudzikinura vanhu kubva muIsraeri. Uye Iye anoramba tsitsi nokupa ruponeso kwatiri tose. Zvinenge sezvinoita vanhu vari kufa nenyota, uye chete munhu ane mvura. Zvino pakutanga zvaiita semvura yaiwanika chete kuvana. Asi zvino tinoona mvura hunowanika tose. Zvaifadza kuti vana vagoponeswa, asi ikozvino tinoona tose tinogona. Huru nzira mufananidzo uyu unokundikana ndechokuti tinofanira kufa nenyota. Asi Mwari nenyasha inopa tose ruponeso kuti tinofanira.
Ndinofunga kuti zvakanaka pachena Handisi raizouya vechiJudha. Vamwe vedu tiri pano usiku huno. Ndinofunga kuti njodzi kutaura kuti vakawanda vedu vari pano havasi vechiJudha. Saka kuti vamwe vedu izvi zvinofanira kunyanya zvinorumbidzwa. Kuti Mwari vaizoita kuisa ziso rake pamusoro pedu pamwe uye kuti Akatumira Kristu wakatifira. sezvo Ephesians 2 anoti, "Naizvozvo yeuka kuti pane imwe nguva imi vaHedheni munyama… yeuka kuti iwe vaiva panguva iyoyo kuparadzaniswa Kristu, vaparadzaniswa Commonwealth vaIsraeri nevatorwa pasungano dzechivimbiso, musina tariro uye musina Mwari munyika. Asi zvino muna Kristu Jesu imi maimbova kure kare, makaswededzwa pedyo kubudikidza neropa raKristu. " (Ephesians 2:11-13 BSN)
Rumbidzai Mwari kuti haana kutisiya kure, tariro zvachose, uye kunze kwake. Haana kuita izvi, asi sezvo tichiziva yaiva urongwa hwake zvose pamwe. Uye tinoziva apo nyaya unoguma. Nyaya rinoguma vanhu vemarudzi ose uye nendimi vachinamata gwayana pamwe muNew Denga New Earth. nekuti "nokuda [ake] ropa [He] Vakasunungurwa vanhu nokuti Mwari kubva mumadzinza ose nendimi nevanhu uye rudzi " (Rev 5:9).
Saka izvi kunofanira nechirongwa nzira isu pamwe chete nomuviri waKristu kunyange ikozvino. Sevanhu vaMwari, tinofanira kuedza kuita upenyu pamwe chete nenzira inoratidza kure urongwa hwaMwari kuponesa-siyana vanhu. Dzimwe nguva chechi yangu anoita rubhabhatidzo musi weSvondo mangwanani. Uye ndinoda kutarisa kumusoro ikoko muone dzakasiyana vanhu kupa zvipupuriro. Vose vane zvakasiyana siyana, asi rokuponesa nyasha dzaMwari aiva vose. Izvozvo zvinogona kutaurwawo kwatiri pano nhasi. Ndinonamata kuti kana vanhu vanouya pakati chechi yedu, vangadai vanoshamiswa basa raMwari muupenyu dzakawanda dzakasiyana-siyana vanhu. Hausi kuponeswa zera rako kana rudzi. Hakuna zvinodiwa nevamwe pane kuva vanoshayiwa. Uye tose tiri vanoshayiwa.
A yakawanda vabereki pandinosangana handizivi ichi. Vanofunga Mwari chete anoponesa nezvezvikwata zviviri zvevanhu: kana dudes yekare chena kana dema vanambuya akare. Asi hazvisi zvechokwadi, rudyi? Rugwaro zviri pachena kuti "Munhu wose anodana zita raJehovha achaponeswa." Kwete vapfumi, kana murombo vanhu, kana vanhu vakwegura kana vechidiki, kana vanhu vechiJudha kana vanhu jena kana dema vanhu. Aihwa, Mwari zvava kupa rake zvose.
isu, sechechi, vanofanira kutya kuita chinhu chinoita sokuti Mwari chete anoponesa munhu mumwe mhando. Ndicho chakavanzika Wesungano Itsva yakanaka. Ndicho chimwe mbiri Evhangeri Mwari aizovaponesa chero mutadzi anoisa kutenda kwavo muna Kristu. Hakusi nezvezvandaifanira kana chete munhu boka.
Sezvo chechi, isu varege zvose zvinobva imwe nzvimbo uye isu tirege kuva dzinza, asi tine chinhu chikuru zvakafanana. Tiri sungano yaMwari mupenyu kuburikidza naKristu. Uye hombe.
Iyi ndiyo zvakare chikonzero tinofanira tuma mamishinari uye avanyengeterere! Ndicho chikonzero nei vamwe vedu vanofanira risingazodamburwi mabhegi edu uye uende! Nokuti Mwari akaita sungano itsva, uye Ari zvaisanganisira ndudzi. Mumwe akatiudza uye mumwe munhu achida kuenda kuvaudza.
Saka kunyange zvazvo rugwaro hurukuro pamusoro sungano yaMwari neimba yaIsraeri, Tinoziva kuti zano rake rakanga rakatsaurirwa. Ngatitorei vachirumbidza Mwari kushanda pose. Chii chaizvo anoita kuti basa Dzakafanana? Ndedzipi dzimwe nzira sungano iyi itsva?
"Ndichaisa mutemo wangu mundangariro dzavo uzvinyore yavo."
Handifungi mashoko ari kuedza kuzochera musiyano guru pano pakati mwoyo uye pfungwa. Ndinofunga kungovashandisa mashoko maviri akasiyana kuti kukurukurirana kuti Mwari ari kuenda kuita chinhu mukati kwatiri. Dzimwe shanduro dzinoti "Ndichaisa mutemo wangu mavari, uye ndichaita uzvinyore yavo."
Zvino chokwadi nguva yokutanga Mwari akavapa Mutemo, Akanyora izvozvo pamahwendefa ematombo. Asi Mwari ari, "Aihwa, ichi nguva kumativi Ndava kunyora pane yavo. "nguva yokutanga Mwari akavapa murairo, Akazviisa pamberi pavo. Asi Mwari ari, "Aihwa, nguva ino kumativi, Ndava kuisa mutemo wangu mukati navo. "
Tiri wajaira nemafungiro mwoyo sezvo noushamwari, damerau nzvimbo mukati. Isu rinobatanidza mwoyo noukama uye Valentine Day uye rudo. asi, rutsigiro mwoyo zvizhinji kupfuura chete mushy nzvimbo mupfungwa. MuMagwaro, mwoyo yedu yose murume womukati. Unosanganisira manzwiro edu, asi inosanganisirawo pfungwa dzedu, kwedu kuda, uye zvido zvedu - zvose zvinoitika mukati. Shoko rechiHebheru chaizvoizvo rinoreva ura, nekuti ndicho mufananidzo vakashandisa. Tinoshandisa shoko mwoyo.
Mwoyo ndiwo musimboti zvose zvatinoita. Zvinoita akafanana GPS hurongwa kuti tungamira zviito zvedu. Dambudziko iri zviri kuputswa. Mwoyo yedu vanotadza vanofunga zvakaipa, uye vanonzwa zvakaipa, uye chido chakaipa. Uye tikasateerera Mwari, nekuti panguva chinoumba ani tiri, tiri zvakaipa.
Hazvinei zvandakaita ndaisakwanisa kusimudza kuti bhaa. Uye pasinei chero mutadzi anoita, havasi kukwanisa chete noushingi nesimba kuchengeta mutemo waMwari zvakakwana.
Uye ichi ndicho chikonzero nei mutemo waMwari, sezvo akakwana sezvo zvakanga, Vaisazombofa kutiponesa. Ndokusaka kungoudza isu zvakanaka kuita taisazomboswedera zvakakwana.
Zvinoita sokuti nhasi, yakawanda nharo vachida kurarama upenyu hwounzenza ane chokuita chii dzinongoitika. Atakazvarwa nedzimwe nokuchiva saka vanofanira kuva zvakanaka. aigona sei
Mwari nokusingaperi vane chinetso chinhu kuti anonzwa saka zvakanaka, kana kuti ave kuita zvepabonde musati maroorana, kana ungochani, kana dzetsika.
Chokwadi mwoyo yedu zvokuti wakaputsika uye kuvhiringidzika, kuti zvakaipa anonzwa zvakarurama uye zvakanaka anonzwa zvakaipa. Apo madzimai edu tsamwisa kwatiri anonzwa zvakarurama nguva arega kuvaremekedza. Apo pandaikura vakarindira wetsina music videos, wawanga kodzero paruchiva pashure vakadzi vaya chidzitiro. Kana kwedu mari chaizvo hazvina wazvo anonzwa kodzero kubiridzira zvishoma mitero yedu. Mwoyo yedu kumunyengera isu. Kutaura zvazviri imwe nzvimbo mubhuku raJeremiya, unoti, "Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose, uye airwara; ndiani anganzwisisa naro?" (Jeremiah 17:9 BSN)
Zvakanga zvisina kukwana kuti mutemo, nokuti mwoyo yedu vanotadza kupindura chete mukupanduka. Mwari aifanira kuvhura isu kukwira, tipeiwo mwoyo yomudzimu ndinobvisa.
basa iri zvemukati ndiwo musimboti yesungano itsva iyi tinofanira kurumbidza Mwari nokuti. Dai Mwari haana kupara kushanda mukati medu achiri taizova tariro. Philippians 2 anotiudza, "Shanda kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera…" Sei? "Nokuti ndiye Mwari anoshanda mamuri, zvose kuda nekuita chido chake chakanaka. " (Philippians 2:12-13 BSN)
Zviri nekuti basa rake mukati kwatiri kuti ticharamba muchishandira ruponeso rwedu. Tinogona chete kushanda externally nokuti Mwari ari kushanda nechomukati mumwoyo medu kuti munoshuva uye kuita Ari akatidana kuti. Mwari ndiye initiator uye enabler pano. Tinofanira kurumbidza Mwari nokuda basa chinoshamisa.
Saka chiedza chechokwadi ichi, ndizvo chaizvo zvatinofanira kunge tichiita. Tinofanira kuponeswa kwedu. Tinofanira kuva nechivimbo mukurwisana kwedu nechivi, tichiziva kuti Mwari ari kushanda matiri. Mwari haasi chete agere Kudenga kuhukura mirayiro vanhu vake uye kuvapa mhosva kana vakasamhanya. Ari chaizvoizvo kushanda mumwoyo yedu kutibatsira kuvimbana uye kuteerera. Hatina chikonzero ane usimbe kutsvaka Mwari.
Pamwe nhasi uri kutamburira nevamwe chivi kuti unzwe sokuti haukwanisi kukunda.
kukurudzirwa. Mwari ari kushanda mamuri. Uye Iye chakasimba kupfuura chivi.
Muupenyu hwangu, Ndinogona kuona izvi zvakajeka kudaro. Kwete kuti handirevi vanotamburira zvakare, asi zviri zvakasiyana. Ndinogona kuyeuka kuva murudo nechivi changu. Zvino ndinorangarira kuchinja papi yaindinetsa. Kunyange ndisati ndatanga kuchinja maitiro angu, Ndakacherechedza kuti nzira ndainzwa, uye sei Ndakafunga, uye chii ndinoda ari kuchinja. Izvozvo zvinogona chete kuva basa womukati raMwari. Uye hapana anokunda kuona Mwari vaite kuti vamwe. Nekuti ndinogona kufara uye kutaura, "Aaa, Akaita kuti neniwo!"
Ichi kwakasanangurwa kubatana mhando kuti vaKristu chete hanya mugove. Mwari ari kushanda mukati medu.
Tinofanira kurumbidza Mwari nebasa rake zvemukati.
Teerera mashoko okupedzisira endima iyi. Mwari anoti,
"Ini ndichava Mwari wavo,uye ivo vachava vanhu vangu. "
Sungano kuti Mwari ari kuita haasi chibvumirano. Haisi chete vamwe chibvumirano kuti aite zvinhu zvakanaka kwavari. Sungano iyi iri midzi ukama nevanhu vake. Mwari haana bedzi akavimbisa kutikomborera nezvinhu, Ari akavimbisa kutikomborera pamwe pachake. Ndiye Mwari wedu. Zvakasiyana kufanana nokusaina tsamba risi kuti furati mutsva. Paunoita kuti, uchingotaura kuvimbisa kubhadhara kumuridzi wemba yenyu kurenda imwe mwedzi. Zvakasiyana aisadaro. Pane munhu, vakaita rudo ikoko zvose zvaaiita kune vanhu vake.
Uye pane tenzi imwe mhando ikoko. Ari isu vakatengwa neropa roMwanakomana wake uye tiri maAri. Rinondiyeuchidza ari In Kristu Ndoga mutsetse, "Nokuti ndiri wake uye iye ndezvangu. Vakatengwa neropa rinokosha raKristu."Mwari nguva dzose ave achitsvaka kuva noukama nevanhu vake, uye ichi chaiva kuramba nesungano itsva iyi.
mukristu, Unofunga Mwari sezvo Mwari wako, kana sezvishandiso Mwari? Paunofunga Mwari ndiye Akangoti Musiki apo? Kana Ndiye Baba venyu? Ko Iye Anoda mweya yenyu?
Nokuti nzira uchiona naYe anochinja paunopiwa kwaAri. Vanhu veIsraeri vakanga vasina kurarama sokunge Aiva Mwari wavo. Vakanga vachinamata zvidhori. Vakanga vasina kuvimba neShoko Rake. Hapana pamusoro mararamiro avo vati kuti ichi chaiva Mwari wavo. Uye hapana pamusoro upenyu hwavo vakati vaiva vanhu vake.
Vaya vakavimba Kristu ndivo vanhu vake. Mwari akaita ndokutsika zita rake pamusoro pedu. Zvose nderake, asi munzira chaiyo Iye akatarisa kwatiri uye akati, "Ivo ndevangu." Uye upenyu hwedu ndipupurire chokwadi ichi.
Apo Jesu akaenda muchinjikwa sezvo mukuru wedu, Akatipa kuwana Mwari Universe. Handizivi kuti aizochinja hwedu munamato upenyu kana isu vakanzwisisa chokwadi kuti ndiye Mwari wedu uye tiri vanhu vake. Ndinofunga pamusoro Exodus apo vanhu vake vakanga varanda uye rugwaro rinoti, "Akanzwa kuchema kwavo uye akayeuka sungano yake namadzibaba avo." MuKristu, Mwari akaita pachaKe kwatiri nenzira Haana kuita pachake kuvanhu vose. Mwari anonzwa minyengetero yako uye iye achagara sei nenzira yorudo. Ndiye Mwari wenyu. Muri mumwe wevanhu vake.
Handizivi ndoda kunyaradzwa isu waizonzwa pakati nomuedzo kana isu vakanzwisisa chokwadi kuti ndiye Mwari wedu uye tiri vanhu vake. Romans 8 anotiyeuchidza kuti hapana chingaparadzanisa isu norudo rwaMwari munaKristu. Ndinofunga pamusoro Josefa muuranda, uye vachiti kuti chii hama dzake dzaireva kuti zvakaipa, Mwari aireva kuti zvakanaka. Pasinei nemiedzo mhando tiri pakati, Mwari achaita chete kuzvishandisa zvakatinakira uye kubwinya kwake. Ndiye Mwari wenyu. Muri mumwe wevanhu vake.
Ndinofunga muupenyu hwangu, nguva apo handisi kunzwisisa ichi, Ndinoita chaizvo Brad haana kutidanira kuita izvi mangwanani. Pane vakabatirira chokwadi kuti ndiri Yake, uye Iye ndezvangu, Ini kutanga kutsausa upenyu hwangu yechiKristu tarenda ratidza; pandinenge vanoita Mwari uye ndinoita kupinda Nyasha dzemutendi yake zvakanaka kana ndichiita zvakanaka zvakakwana. Asi kana ini kunzwisisa chokwadi kuti ndiye Mwari wangu, uye ini ndiri mwana wake, Ndinoda kumuteerera nokuti tinomuda uye kubva vachionga nyasha dzake. Handifaniri kuita uye vandizive kwaAri. Mwari ari kurutivi rwangu. Ndiani Ndiri kidding? Iye hanya utsvene hwangu kupfuura zvandinoita. Ndiye Mwari wangu. Ini ndiri mumwe wavanhu vake.
Ndaigona kuenda mberi. Asi zvinokosha, kuti isu vacho vakabata ichi. Ndiye Mwari wedu uye tiri vanhu vake. Uye tinofanira kumurumbidza ichi basa interpersonal yeruponeso.
Ndinofunga okuti anoisvokosha mundima iyi mashoko duku mbiri ungadaro akapembera pamusoro, "Ndicha." Mwari anoti, "Ndichaita sungano itsva." Mwari anoti, "Ndichaisa mutemo wangu mavari." Mwari anoti, "Ini ndichaita uzvinyore pasi yavo." Anoti, "Ini ndichava Mwari wavo uye ivo vachava vanhu vangu."
Hama nehanzvadzi, ichi Sungano Itsva haasi pakupedzisira kuvimba nemi. Rinotanga uye rinopera naMwari. Mwari ndiye aiva hurongwa. Mwari ndiye aiva nengoni uye havana kutora isu kubva nguva yokutanga isu takatadza. Mwari ndiye akatuma Mwanakomana wake. Mwari ndiye uya akadururira hasha dzake pamusoro Kristu. Mwari ndiye akamumutsa kubva kuvakafa. Mwari ndiye akaita iwe mutsva chisikwa. Mwari ndiye akakupa Mweya wake. Mwari ndiye akakupa moyo mutsva. Mwari ndiye ari nokukutsvenesai. Mwari ndiye huchakuchengeta. Uye Mwari ndiye ichakurumbidzai. Sungano iyi rinotanga uye rinopera naMwari.
Mwari akatsunga kuita kuti pachake vanhu. Uye iye akaita pachake kuti vanhu.
Sevatendi izvi kunofanira kutiunzira nyaradzo huru. Nokuti tinoziva kuti kunyange kusateerera kwedu kunogona musaputsa sungano iyi. Kunyange upenzi hwedu haagoni kuita sungano iyi vanotadza. Nekuti Mwari ari kubasa, Ari wakazvikumikidza kwatiri, uye Iye hapashayikwi.
Ava makomborero kuti tiri chikamu ichi Wesungano Itsva. Asi chokwadi ndechokuti izvi vari kukomborera anowanikwa kune vaya vari musungano naMwari chete. Uye isu kupinda sungano naMwari apo tinovimba upenyu, rufu, nokumuka kweMwanakomana wake, Jesu Kristu. Kana don't kuziva Kristu, pazvivi zvenyu uye vanotenda kwaari nhasi. Pane pakudurura hasha dzake, Mwari achadurura kuongororwa fuma musoro wako nokusingagumi.
Ungacherechedza, kuti mufananidzo akapendwa rinonzwika awfully akakwana. Uye chokwadi hapana izvi zvinoumba Nesungano Itsva takataura pamusoro huchawanikwa zvakakwana kusvikira tiri pamwe naye. Kana tiri pamwe naye tichaona akakwana, wakachena dzakawanda mwenga waKristu. Kana tiri pamwe naye tichave vanhu vakakwana, vakachena mumwoyo vanoda Kristu uye zvose nzira dzake. Kana tiri pamwe naye, tichava noukama akakwana naMwari wedu uye isu uchamukudza sezvo vanhu vake. Kusvikira ipapo tinoenderera mberi uye vanoedza kuvimba naye zvakanyanya nerimwe zuva. Ngatitorei kunyengetera.